Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.2.3 Isiphetho
Kathisha Human kukwenza eziyinkulungwane abasizi ucwaningo.
kathisha amaphrojekthi Human ukuhlanganisa umsebenzi eziningi non-ochwepheshe ukuxazulula izinkinga okulula umsebenzi-big-scale ukuthi kungukuthi ixazululwe kalula computer. Basebenzisa uqhekeko-zisebenza-sihlanganise isu ukuba aphule inkinga enkulu ibe izicucu eziningi ezilula micro-imisebenzi ukuthi zingaxazululwa abantu ngaphandle amakhono akhethekile. Isizukulwane Second womuntu kathisha izinhlelo futhi usebenzise umshini ofunda ukuze ikhulise umzamo womuntu.
Ngo ucwaningo social, kathisha amaphrojekthi womuntu cishe zisetshenziswe ezimweni lapho abacwaningi bafuna ahlukanisa, ikhodi, noma ilebula izithombe, video, noma imibhalo. Lezi ngeengaba akuzona kuphele; zingabantu izinto zokusetshenziswa ucwaningo. Ngokwesibonelo, isixuku-esephepheni of manifestos ezombusazwe ebesingase sisetshenziselwe ukuze ahlole imibono mayelana Dynamics ukunakwa ngase ukufuduka.
Ukuze kuqhutshekwe ukwakha umuzwa wakho, Ithebula 5.1 inikeza izibonelo ezengeziwe zendlela kathisha womuntu iye yasetshenziswa ocwaningweni social. Leli thebula libonisa ukuthi, ngokungafani Galaxy Zoo, nezinye eziningi kathisha amaphrojekthi nabantu basebenzisa micro-msebenzi temisebenti Imakethe (isib, Amazon Mechanical Turk). Ngizobuya ubuyele lolu daba nogqozi umhlanganyeli lapho mina ukunikeza izeluleko mayelana nokwakha yakho siqu mass ukubambisana project.
Ithebula 5.1: Izibonelo kwabantu kathisha amaphrojekthi ucwaningo social.
esephepheni manifestos party umbhalo wezabasebenzi micro-msebenzi Benoit et al. (2015)
luthathe ukwaziswa umcimbi izindaba nezihloko ezikhulumela Occupy imibhikisho e-200 emadolobheni umbhalo wezabasebenzi micro-msebenzi Adams (2014)
ngezigaba Izihloko zamaphephandaba umbhalo wezabasebenzi micro-msebenzi Budak, Goel, and Rao (2016)
emnqumweni imininingwane yomcimbi kusuka Diaries of amasosha eMpini Yezwe 1 umbhalo amavolontiya Grayson (2016)
ukubona ushintsho olwenzeka ngo amabalazwe izithombe wezabasebenzi micro-msebenzi Soeller et al. (2016)
Ekugcineni, izibonelo kulesi sigaba show ukuthi kathisha womuntu kungaba nomthelela kwezombuso nesayensi. Khumbula, ukuthi Schawinski futhi Lintott abangu graduate lapho beqala Galaxy Zoo. Ngaphambi yobudala digital, iphrojekthi ukuze uhlukanise esigabeni million galaxy kwakuyodinga ukuba nesikhathi esinengi imali ukuthi ngabe kuphela esiwusizo sendlela yokuphila kahle uxhaso futhi nabanye isiguli oprofesa. Lokho ayisekho kuyiqiniso. kathisha amaphrojekthi Human ukuhlanganisa umsebenzi eziningi non-ochwepheshe ukuxazulula izinkinga okulula umsebenzi-big-scale. Okulandelayo, Ngizokukhombisa ukuthi ukubambisana mass singasebenza kwezinkinga zidinga ubuchule, ubuchwepheshe ukuthi ngisho umcwaningi lingunina hhayi abangase babe nazo.